10 fironana eo amin'ny fampandrosoana ny indostria crypto in 2018 - Vaovao farany - Blockchain News
Janoary 21, 2018 Admin
10 fironana eo amin'ny fampandrosoana ny indostria crypto in 2018
ny manam-pahaizana avy amin'ny Ny singa Group nanadihady tamin'ny taona lasa Crypto-tsena ary nilaza folo fironana ny fampandrosoana ny indostria ity ao amin'ny taona vaovao. Soso-kevitra ihany koa izy ireo, araka ny tranga, fisehoan-javatra sasany eto amin'izao tontolo izao dia afaka hanana ny crypto, ny fiandohan 'izay nahita in 2017.
1. Ny fanapahana lehibe iray Crypto Exchange
Ny fitomboan'ny liana amin'ny vola crypto-nahatonga in tara 2017 rehefa lehibe firohotry ny mpampiasa vaovao ny crypto-fifanakalozana. Noho io, ny Bittrex, Bitfinex sy fifanakalozana Binance maintsy hampiato ny fisoratana anarana ny mpampiasa vaovao, tahaka ny isan'ny fangatahana nihoatra ny fahaiza-manao ara-teknika ny toerana.
Noho ny tinady amin'ny avo 2018 mpilalao vaovao ho avy any an-tsena, maro amin'izy ireo, tena mety ho, dia tsy manana ekipa matanjaka ara-teknika sy ny traikefa. Mpijirika tsy malahelo ny fahafahana mijery ny fahalementsika amin'ny tanora orinasa. Mety ihany koa fa ny iray amin'ireo mpilalao lehibe ho lavo niharam-boina ny intruders, miasa ambany noho ny fitsipika sy ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa fitantanana doza.
2. Hoavy ny Cryptocurrencies, safidy misimisy kokoa, ny fananganana ny crypto-vola ETFs
Ny fijery ny hoavy fifanarahana for bitcoin nanjary somary tsotra lojika sy vahaolana ho an'ny cryptology. Toy izany no ho tsara tarehy fifanarahana ara-bola fitaovana izay mampitombo ny liquidity ny voalohany crypto vola. Ao amin'ny fampandrosoana izany tari-dalana, eo amin'ny toerana voalohany, nentim-paharazana mpampiasa vola liana, izay tsy niditra tao kriptonok avo noho ny loza mety hitranga. Ary mihevitra fa ny ady eo amin'ny CME Group sy CBOE Global Markets efa nivadika ho tena hazakazaka ho amin'ny lohatenin'ny voalohany fifanakalozana tahiry fanatitra bitcoin hoavy. In 2018 dia ho hitantsika ny fitomboana teo amin'ny isan'ny vokatra ara-bola toy izany.
Amin'ny crypto-bola ETFs (varotra ny tahiry fifanakalozana), ny zavatra rehetra dia sarotra kokoa. Na dia eo aza ny zava-misy fa ny dingana voalohany ao amin'ny tari-dalana ity dia efa naka tamin'ny taon-dasa, ny manam-pahefana ara-bola ny ankamaroan'ny firenena dia tsy vonona ny fanohanana toy izany vola noho ny tsy fahampian'ny lalàna ny kriptonka.
Na dia izany aza, tamin'ny volana Jona 2017 Soisa fikambanana Crypto Fund AG nanambara ny fandefasana tontolo izao voalohany crypto-bola maro samihafa amin'ny tahirim-bola. Na izany aza, ny fanambarana an-gazety ny orinasa manamafy fa tahirim-bola izany dia tsy ETF, tahaka ny eo-ny-latabatra ary natao afa-tsy amin'ny mahafeno fepetra mpampiasa vola. Mandritra izany fotoana izany, ny Chicago Exchange ny Options CBOE efa naniraka ho any amin'ny US Fiarovana sy Exchange Commission (SEC) ny fangatahana ny fandefasana ny enina BitCoins-ETF.
3. Faobe fanitsiana ny altcoyins
Rehefa hoy izy ireo, cheaply nahazo – mora very. Ary eny an-tsena dia misy maro be crypto-mpamatsy vola, ao amin'ny Portfolios izay misy vola madinika illiquid tsy misy ilàna azy. Ireo vola madinika matetika natolotra tamin'ny fifanakalozana tahiry kely amin'ny fahafahana voafetra. Miaraka amin'ny fanitsiana faobe ny tsena, izay, ohatra, izahay efa nahita ny andro vitsivitsy farany, ny mpivarotra vola madinika toy izany dia tsy hahita ny mpividy, ary dia hitady izay lalan-kivoahana, miteraka recalculation sy ny fanovàna ny altcoy taranja.
4. Mifantoha amin'ny fitsipika ny Vahoaka Sales
Ny Desambra fanapahan-kevitry ny SEC mba hanampina ny ICO ny kaliforniana Munchee orinasa sy manery azy mba hiverina ny mpampiasa vola’ vola no dingana iray lehibe eo amin'ny famoronana lalàna ny amin'ny lalàna ny fahadisoana. Ny mpitari-draharaha SEC ankehitriny ihany koa dia nilaza fa ny asa nanirahana azy dia miasa amin'ny famoronana ny boky ho an'ny ICO sy fomba vaovao ho an'ny mifehy ny cryptology. Ireo drafitra dia mety ho lasa zava-misy efa amin'ity taona ity.
Noho izany, dalàna no miady amin'ny mpikarakara ny Pump- ary fanariam-tetika, Insider varotra sy ny hafa ho fitaovana ezaka kriptornke.
Noho ny zava-misy fa cryptology no voalohany eran-tena iraisam-pirenena sy ny tontolo iainana izay Tsy misy sisintany mametra, dia ho mahaliana ny mahita ny vokatry ny ezaka toy izany fitsipika.
5. Ny firongatry ny asa ho an'ny rafitra mpilalao
Ny tsy fisian'ny mpamatsy nentim-paharazana ao amin'ny faritra toy izany ho toy ny rafitra fitantanana mba, fitantanam-bola rindrambaiko, depositories, sy ny asa hafa ilaina ny tsena, manakana ny andrim-mpilalao tsy hiditra cryptology. Raha vao azo ianteherana, ary voaporofo vahaolana dia misy amin'ny sokajy ireo, maro ny loza mety hitranga mifandray amin'izao tontolo izao ny crypto intsony mampitahotra be mpampiasa vola. In 2017, ny voalohany mpamatsy ny tolotra toy izany vao hita eny an-tsena, fa tamin'ity taona ity izy ireo mba hanaporofoana ny vokatra raha toa ka te-hisarika ny andrim-mpilalao.
6. Ny fahombiazan'ny mpivarotra dia miankina amin'ny ny fahaizany
Taona lasa, izahay nahita fahombiazana maro tantara crypto mpivarotra. Izany dia izao mazava tsara fa ny vola miditra dia ho azo inoana kokoa noho ny fitomboan'ny fihetsehana tsena izay overheated amin'ny 2017, fa tsy amin'ny olona fahaiza-manao. Ny mpandray anjara amin'ny cryptory dia hanomboka hitady vahaolana mahomby sy voahevitra, satria amin'ny vintana ihany ka tsy handresy. In 2018, matihanina, Tsy tsara vintana ireo, dia ho tratry ny ananany ny fidiram-bola ambony.
7. Nitombo volatility noho ny hoavy amin'ny crypto-vola, safidy, ary crypto-bola ETFs
Raha vao manomboka izany vokatra ara-bola ho malaza amin'ny cryptology, dia ho avy hatrany hahita ny vokany be eo amin'ny fironana. Satria na dia eo amin'ny tsenam-nentim-paharazana maro isan-taona dia misy mafy volatility, noho ny zava-nitranga fantatry ny rehetra derivative mpilalao mifandray amin'ny fitaovana ara-bola.
Raha ny krypton, hitombo volatility eto, indrindra rehefa Dérivés hoavy sy ny hafa dia mihidy, na rebalancing dia ho ilaina.
8. Dia ho hitantsika ny fomba nentim-paharazana iray, fara fahakeliny broker orinasa fampiasam-bola-mandeha bankirompitra noho ny diso fitantanana ny crypto-Sampanteny
Na dia eo aza ny zava-misy fa efa misy Sampanteny amin'ny Bitcoin amin'ny endrika hoavy, dia tsy maintsy tsy hanadino fa io fototra pananana dia sarotra ny amin'ny asa. Iray nahomby raharaham-barotra na diso ny fehezan-dalana, mety fisarahana fahavoazana ho an'ny orinasa, izay tsy misy traikefa amin'ny niara-niasa tamin'ny crypto-vola.
9. Cryptomarket dia nitondra ny psikolojia
Fironana in cryptology matetika no entin'ny fihetseham-po ny omby izay mety hahatonga ny mpivarotra mba mino fa izy dia afaka mihazakazaka ny tsena amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy. Toy izany ny sehatra ho an'ny maneho ny heviny manokana sy ny vintana kely afaka mahatsapa tsotra mpampiasa vola invulnerable. 2018 no manaporofo fa ny tsena no nitondra ny Insider vaovao, fa tsy ny hevitry ny mpivarotra iray sy ny mpanara-dia.
Ny fanesorana ny crypto vola ao amin'ny Fiat dia malemy rohy ao amin'ny orinasa crypto. Fifanakalozana ankamaroan'ny manome ny fetra ny $ 100,000 isam-bolana, ary voamarina tanteraka ihany mpampiasa. Noho izany, cashing ny cryptosaving Tena sarotra, ary hampijanona eto dia tsy hanampy. In 2018, cryptology mpilalao maro no ho liana amin'ny famahana ity olana. Ary Azo inoana fa ity taona ity dia manomboka asa vaovao, ao an-tsena, manome tolotra ho an'ny fanesorana ny crypto-vola in Fiat.
Bitcoin's Wild 18% misamboaravoara! Trum...
Previous Post:Inona no atao hoe Bitcoin Core sy izay ataony
Next Post:Blockchain News 21 Janoary 2018